« Lalan’ny Frankôfônia » eny Ivato : niteraka korontana ny nanovana indray ny soritra | NewsMada
« Lalan’ny Frankôfônia » eny Ivato : niteraka korontana ny nanovana indray ny soritra
Tsy mety milamina. Efa nisy ny hetsika voalohany nataon’ireo mponina eny Ivato, izay voakasiky ny fandravana trano hanamboarana ilay « lalan’ny Frankôfônia ». Nisy ny fifanantonana ary efa hita ny marimaritra iraisana. Izay hahakely ny fandravana, mba tsy hahabetsaka ny vola hivoaka amin’ny fanjakana amin’ny fanonerana ireo trano voakasika no natao. « Gaga izahay nisy teratany sinoa iray sy malagasy roa nidina nijery ny soritra efa vita, ka nanakisaka izany indray. Efa nambara anefa fa io ny soritra farany tsy miova intsony, izay efa vita roa volana mialoha. 20 metatra mianatsimo ary 20 metatra mianavaratra no efa tapaka teo. Lasa niova naka 8 metatra nianatsimo izany, ka lasa misy trano maromaro izay ara-dalàna no voakasika indray”, hoy ny nambaran’ireo mponina, nosoloin-dRakotomalala Jerôme na i Roman tena.
Naka vadintany ireo mponina nijery ny zava-misy. Nanontany ny mpiasan’ny kaominina sy ny fokontany ireto farany mba hanamarina fa nisy tokoa ny fanakisahana ny soritra. Mbola tazana eo tokoa ny soritra izay efa nifanarahana sy ny soritra vaovao, handrava trano lehibe ara-dalàna maromaro. “Nanatona ny tompon’andraikitra izahay nanontany ny antony, ka nambaran’ireo fa vokatry ny valin’ny fanadihadiana natao tamin’ny tany na ny “étude du sol” izany. Efa vita taloha be anefa io, satria efa roa volana mahery no nivoaka fa io ny soritra farany. Raha ny fihevitray, misy mahitahita ao, te hanana eny amin’ny ankilany ka nanao izay hanakisahana ny aty atsimo”, hoy ihany ny mpitondra teny.
Mbola nisy ny hetsika nataon’ireo mponina ny asabotsy teo, nilanjan’izy ireo sora-baventy nanoherana izany. Niteraka fitohanana be io, ka niantso ny Emmo/Reg hanampy azy ireo mihitsy ny zandary vao nijanona ny hetsika. Tantara mitohy.